Ammaanka Cabudwaaq oo hagaagay iyo maamulka oo ka digay rasaas xiliyada qaar dhacda (Dhegeysi) – Radio Daljir
Ammaanka Cabudwaaq oo hagaagay iyo maamulka oo ka digay rasaas xiliyada qaar dhacda (Dhegeysi)
Seteembar 11, 2013 5:35 b 0
Cabudwaaq, September 11, 2013 – Maamulka degmada Caabudwaaq ee dowladda Soomaaliya ayaa shaaciyey in ay soo roonatay xaalada amniga ee degmada oo ku taala woqooyiga Galguduud, isla markaasna ka mid ah meelaha dowladda Soomaaliya ay u dhistay maamulka KMG ah.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Caabduwaaq mudane Cabdirisaaq Cali jabiin (Gacal) oo shir jaraa?id maanta ku qabtay gudaha magaalada, ayaa degniin u jeediyey bulshada isagoo xusay in ay jiraan rasaas laga maqlo magaalada xiliyada qaarkood, wuxuuna ku baaqay in amniga laga sugo.
Docda kale mudane Jabiin wuxuu sheegay in horumar baaxad leh iyo amni buuxa haatan laga dareemayo degmada Caabudwaaq ee Galguduud, wuxuu intaas ku daray in ay taasi ku timi wada-shaqeyn dhexmartay bulshada iyo maamulka dowladda.
Maamulka dowladda federaalka ee Caabudwaaq waxay ugu dambeyntii baaq u direen dowladda dhexe oo ay ka codsadeen kaalmeyn dhinacyo badan leh, si looga boxo caqabado badan oo ku hor gudban amaanka iyo nolol wanaagsan oo la helo.
Gudaha Cabaduwaaq waxaa bilo ka ?hor ka dhacay is rasaaseyn dhex-martay bulshada iyo ciidamada booliska, iyadoo uu dhaawac soo gaaray 18 Askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ee degmada, kadib markii ay isku dayeen in ay dhex-dhexaadin u sameeyaan dad dhul isku haystay.
Dhegeyso:- Shir jaraa?id oo uu qabtay Gudoomiye ku xigeenka Caabudwaaq Cabdirisaaq Jabiin
FOA iyo ASAL oo bulshada iyo beeralayda Bari ku dhiiri-gelinaya isticmaalka dalaga beeraha (MAQAL)